လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] - Page 3
101 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 17th March 2010, 2:18 pm
ဟီး။ ဘယ်သဘောမှ ပါတော့ပါဘူး။ ဒီလိုဘဲ စကားအဖြစ်ပြောလိုက်တာ။
(မြန်မာစကားများ တယ်လည်း ခက်တယ်။ နားလည်မှုတွေလွဲတတ်လိုက်တာ။ )
102 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 24th March 2010, 11:01 am
အဲဒိအပိုင်းမှာ ကျနော်မရှင်းတာက rem ဆိုတာက ရေးလည်းရတယ်.. မရေးလည်းရတယ်လိုဖြစ်နေတော့ ဘာလို့များရေးထားတာလဲဆိုတာကိုသိချင်ပါတယ်... နောက်ဆုံးကုန်ကန်ု start တစ်ခုတည်းနဲ့လည်း ကိုဖွင့်ချင်တာကိုဖွင့်လို့ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်... အဲဒိမှာထပ်ပြောစရာရှိတာက rem title test4 ဆိုတာက ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သွားလို့ထည့်ပေးထားတာလဲဟင်... တကယ်တမ်းဆို folder name က test အနေနဲ့ပဲရှိနေတယ်လေ... မဟုတ်ဘူးလား... အကြောင်းမဲံတော့မရေးလောက်ဘူးထင်လို့.. ဘယ်လိုမှရှာလို့မရတော့လို မေးတာပါ...
ဆိုပြီးရှာလိုက်တော့တွေ့တယ်... အဲဒိတော့ ဒီကောင်က မထည့်လည်းရတယ်ဆိုတဲံအစားထဲမှာပါလား... ထမင်းသိုးဟင်းသိုးလေးလားဟင်...
103 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 24th March 2010, 4:15 pm
if '%choice%'=='1' start testpic.jpg
if '%choice%'=='2' goto :math
104 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 24th March 2010, 7:08 pm
105 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 5th April 2010, 9:13 pm
နာ့ အလှည့်မကျသေးဘူးနဲ့တူတယ်.... သူလည်း reply ကြွေးကျန်တွေဖြေနေရတာ မပြီးသေးဘူး... ပြန်ပေးဦးနော်... မေးထားတာလေးတွေကို... နောက်ထပ်မေးစရာတွေ ကျန်သေးတယ်... လာဦးမယ်...
106 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 5th April 2010, 9:29 pm
mars wrote: နာ့ အလှည့်မကျသေးဘူးနဲ့တူတယ်.... သူလည်း reply ကြွေးကျန်တွေဖြေနေရတာ မပြီးသေးဘူး... ပြန်ပေးဦးနော်... မေးထားတာလေးတွေကို... နောက်ထပ်မေးစရာတွေ ကျန်သေးတယ်... လာဦးမယ်...
အမလေး။ တွေ့ပါတယ်ခင်ဗျ။ တူကလည်း သတိပေးလိုက်တာ။
ဟီး။ အလှည့်မကျတာဟုတ်ဘူး။ Reply တွေ ပြန်ရမှာ များလွန်းလို့ မောပြီး လျှောက်သွားနေတာ။
ကိုကြီးကလည်း အနားကိုမပေးဘူး။ ဟွန်း။ လူဇိုး။
ကျွန်တော်တို့ Coding တွေရေးရင် ၊ Bat မှာမှမဟုတ်ဘူး ၊ တခြား Language တွေမှာ သက်ဆိုင်ရာ Comment ပေးနိုင်တဲ့ Keyword လေးတွေရှိကြပါတယ်။
အဲဒီ့ Keyword လေးတွေ သုံးရင်းနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ Product(Program) ကို Maintainable ဖြစ်အောင် လုပ်ကြရတာပါ.
Comment ပေးထားတော့ ဘယ် Code က ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာကို နောက် Developer လည်း သိသွားတာပေါ့။
blackfire903 wrote: ကျွန်တော် တစ်ခုမေး မယ်နော်. .. bat file နဲ့ကျွန်တော် ပေးချက်တဲ location တစ်ခုမှာ autorun.inf ကို auto ပေးရေးချင်တယ် အဲဒါဘယ်လို ရေးရမှလဲ ဟင်.
ကျွန်တော် ရေးထားတဲ့ Tutorial ကို အစအဆုံး တစ်ခေါက်လောက်ဖတ်လိုက်။
ပြီးရင် အစ်ကို လုပ်ချင်တဲ့ Process ရဲ့ Logic ကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။
အဲဒီ့ကနေ စဉ်းစားလို့ရလာတာကို ရေးကြည့်ပါ။
ကျွန်တော်ရေးပေးထားခဲ့တဲ့အတိုင်းမှာ တိုက်ရိုက်တော့ တူတာမပါပေမယ့် ၊ သဘောတရားတစ်ချို့ပါနေပါတယ်။
မလုပ်ပေးချင်လို့ မဟုတ်ဘူးနော်။ Coding ရေးပေးလိုက်ရတာလွယ်တယ်။ ဘာမှအပန်းမကြီးဘူး။ ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားစေချင်လို့ပါ။ ကို mars ရဲ့ အကြံပြုချက်အတိုင်း နောက်ကိုလည်း အကောင်အထည်ဖော်သွားမှာပါ။ ဒီစနစ်ကို တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲ ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင် Learner တွေအနေနဲ့လည်း တကယ် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်
107 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 5th April 2010, 9:31 pm
အစ်ကိုမေးတာ သိပ်မရှင်းဘူး။ နည်းနည်း ထပ်ရှင်းပြပါဦး
(ငါတော့ သေပြီထင်တယ်။ တကယ်လိုက်လုပ်တဲ့သူနဲ့ တွေ့ပြီ။ မေးခံရတော့မယ်။ )
108 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 6th April 2010, 9:47 am
အဲဒိလိုရှင်းထားတာမှာ အပေါ်ကမေးထားသလို နည်းနည်းလေးပြင်ထားမှအလုပ်လုပ်ပါတယ်... အဲဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ရှင်းပေးပါဦးနော်... ပြီးရင်မေးစရာတွေကရှိနေသေးတယ်... ပြန်လာလာချင်းအားနာလို့..
109 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 6th April 2010, 12:46 pm
TIME ဆိုတဲ့ Command အကြောင်းကို ရှင်းပြပေးပါ့မယ်
အဲဒီ TIME commad က window7မှာအလုပ်မလုပ်ဘူးဗျ... xp မှာတော့အလုပ်လုပ်တယ်... အဲဒါဘာများကွာလို့လဲဟင်... ရှင်းပြပေးလို့ရလား... အလုပ်လုပ်အောင်ကော ဘာတွေများသွားပြင်ပေးလို့ရဦးမလဲ.... ရှင်းပေးဦးနော်...
110 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 6th April 2010, 2:23 pm
အဲဒိ coding တွေကိုသုံးတဲ့နေရာမှာ သူ့ချည်းပဲ (အဲဒိဖိုင်ကိုပဲ) D.Click နှိပ်ပြီး Run ရင်ကောမရဘူးလား.... ဘာလို့လဲဆိုတော့
နောက်ပြီး ညီစွမ်းပြောထားတာက cd command နဲ့လမ်းကြောင်းပြောင်းခိုင်းတာပါ... အဲဒါကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ... အကိုကတော့ အကိုထင်သလို run> cmd> ကနေ အကိုသိမ်းထားတဲ့အဲဒိဖိုင်ရှိတဲ့နေရာအထိသွားတယ်.... အကိုက new folder ထဲမှာထည့်ထားတော့ သူ့လမ်းကြောင်းက ဒီလိုပြတယ်...
C:\_Documents and Settings\_sid\_Desktop\_New Folder>
အဲဒလိုဖြစ်နေပြီ... ဟုတ်လား အဲဒါမှန်လား.. အကိုက အဲဒိအောက်မှာ loop.bat ဆိုပြီးသိမ်းထားတာ.... အဲဒိတော့ အကိုက အဲဒိနောက်မှာ loop.bat ဆိုပြီး ရိုက်တယ်... နောက် အဲဒိဖိုဒါထဲမှာပဲ သိမ်းထားတဲ့ ဖိုင်နှစ်ဖိုင်ကို ဖျက်ဖို့အတွက် အဲဒိဖိုင်နာမည်တွေကို ညီစွမ်းပြထားသလိုရေးပေးလိုက်တယ်... ဒီလိုရေးသလိုလေ..
အဲဒိa,bနေရာမှာတော့ အကိုက အကိုဖျက်ချင်တဲ့ဖိုင်ကိုရေးထားတယ်...
အဲဒိမှာ ပြပေးတာက ဒီလိုပြပေးတယ်...
IN<hi.txt was unexpected at this time.
ဆိုပြီးပြနေတယ်... အဲဒိတော့ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ... နောက်ပြီးအကိုသိချင်တာ ဒီလိုလုပ်မှပျက်တာလား... အကို ညီစွမ်းပေးတဲ့ coding တွေကို သိမ်းထားတဲ့ loop.bat ကို Run ရင်ကောမရဘူးလား.. အကိုလုပ်တော့မရလို့... ရှင်းပါဦးနော်...
111 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 6th April 2010, 9:36 pm
ကို mars ရေ။
ခု တော်တော်ကို ရှုပ်ကုန်ပြီ။
အကြွေးတွေလည်း အများကြီးတင်နေတယ်။ မနိုင်တော့ဘူး။
လုပ်ပေးရမှာ ၊ လုပ်ချင်နေတာ ၊ လုပ်သင့်နေတာ
ခဏလောက်နော်။ အစ်ကိုမေးထားတဲ့ဟာတွေက အဖြေရှာရတာ လွယ်ပါတယ်။ Tutorial မှာတောင် Julykglay မေးတုန်းက အဲဒီ့ Concept ပါသွားသေးတယ်။ အဖြေဆင်တူတယ်။ နည်းနည်းလောက်ရှာဖတ်ကြည့်ပါနော်။
112 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 8th April 2010, 2:30 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-10-15
ဒီသင်ခန်းစာတွေအားလုံးကို ebook ရရင်ကောင်းမှာဘဲဗျာ..... ...............
113 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 8th April 2010, 3:56 pm
oasislove wrote: ဒီသင်ခန်းစာတွေအားလုံးကို ebook ရရင်ကောင်းမှာဘဲဗျာ..... ...............
မပူပါနဲ့ဗျာ... $ƴǩǾ ကပြောထားတယ်.. စာမေးပွဲပြီး ဧပြီလကုန်လောက်ဆို ရမှာပါ ... အဲဒိထက် မကျော်စေရဘူး စိတ်ချ... သူဒါကိုလုပ်နေတာ ကြာပြီ... လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်....
($ƴǩǾ ရေ ငါတော့ အာမခံထားလိုက်ပြီနော်... သေချာလုပ်ပေးလိုက်ပါဦး... ငါမတောင်းဘူးနော်... သူတို့ပြောတာ... ငါကရှင်းပြရုံတင်... )
114 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 30th April 2010, 10:41 pm
အခုလို တင်ပြထားတာ ...ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗျား...
နောက်လဲ ရေးပါအုံးနော် ...
နောက်လာမဲ့ သင်ခန်းစာကို စောင့်မျှော်လျှက် ပါ ....
115 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 30th April 2010, 10:56 pm
I forgot this thread. Sorry for that.
116 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 1st May 2010, 11:47 am
အ၇မ်းအသုံးဝင်ပါတယ် E book လုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပေးပါအစ်ကို
117 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 16th May 2010, 8:05 pm
thanks u for ur bat file lessons
some of codes were testing on my pc but i have gotalittle pbs about cmds
especially in del cmd.
can i now its usage in detail and why i can't delete some .exe file showing access denied.
i also wanna know if i can get bat file lessonsebook
i appreciate u [You must be registered and logged in to see this image.]
118 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 3rd June 2010, 10:37 am
အင်း.. စာမေးပွဲ မပြီးသေးလို့လား မသိဘူးနော်... မျှော်နေတာ လည်ပင်းတောင် ရှည်တော့မယ်..
Ebook က မရသေးဘူး.. အတင်းကြီး ဖြစ်နေမလား မသိဘူး... တကယ်ကို စိတ်ဝင်းစားတာပါ...
119 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 11th June 2010, 8:34 pm
ကျွန်တော် ဒီဘက်လည်း မရောက်တော့သလို ၊ ဒီစာအုပ်ကို လုပ်ပေးဖို့ လည်း အချိန်မရတော့ဘူးခင်ဗျ။
အားလည်းအားနာပါတယ်။ လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးမှ ကတိမတည်သလိုဖြစ်သွားတယ်။
120 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 22nd August 2010, 11:06 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-08-21
သင်ခန်းစာတွေကို စုပြီးတော့ PDF လုပ်ထားတာတော့ ရှိတယ်။ အသုံးလိုရင်တော့ ဒေါင်းလိုက်ပါ။
((( [You must be registered and logged in to see this link.] )))
(((( [You must be registered and logged in to see this link.] ))))
ခုလို တကူးတကရေးပြီး ရှင်းပြပေးတဲ့ ကို$ƴǩǾ ကိုလည်း ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ နောက်ကိုလည်း များများဖြန့်ဝေနိုင်ပါစေ....
လင့်တွေကို ဒေါင်းလို့မရတော့ဘူးဆိုလို့ ပြန်ပြင်ပေးထားပါတယ်။။။။ အဆင်ပြေပါစေ.....
Last edited by naingagsoe on 27th September 2010, 6:05 pm; edited2times in total (Reason for editing : Link ပြင်ဆင်ခြင်း)
121 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 27th September 2010, 9:04 am
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-09-20
အစ်ကိုရေ ဒေါင်းလို့မရလို့ Link လေးပြန်တင်ပေးပါဦး အရမ်းစိတ်ဝင်စားလို့ပါ
122 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 27th September 2010, 9:35 am
ကျနေ်ာတို့ ပြန်ပြီး တင်ပေးပါမယ်ဗျာ
123 လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] Pdf ဖိုင်လေးပါ on 28th September 2010, 9:25 am
expire date က (၇)ရက်ပဲခံပါမယ်
အုပ်ချုပ်သူ သူငယ်ချင်းများနှင့် အသင်းဝင်တို့ရေ
ီDownload Link :.
Ebook Down Load ဆိုတဲ့နေရာမှ ပြန်တင်ပေးကြပါခင်ဗျာ
124 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 29th September 2010, 9:00 am
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ ဘယ်နေရာမှာနှိပ်ရမှန်းမသိလို့ ဒီနေရာကပြောလိုက်ရတာခွင့်လွတ်ပါဗျာ။
125 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 23rd October 2010, 11:55 am
Tutorial ebook ကို download ရအောင် ဂရုတစိုက်တင်ပေးတဲ့အတွက် ကျနော် တလေးတစား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် အကျိုးမရှိဘူးထင်ရင် ဆက်မဖတ်ပါနဲ့၊ Tutorial ကြီးကိုဖတ်ရတာ အချိန်ကုန်တယ်၊ ဒါတွေဖတ်ရင်ငါ့အတွက်ဘာရမှာလည်း ဘာဖြစ်လာမှာလည်း ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေ တွေ့ရတာကျနော်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဘယ်လိုပညာရပ်မျိုးမဆို ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိနေတာ ကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့ အသုံးပြုသူတွေရဲ့တာဝန်ပဲလို့ထင်ပါတယ်။ ပညာရပ်တစ်ခုကို အချိန်တွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေ ရင်းပြီး ရေးပေးနေသူတွေရဲ့ စေတနာတစ်ခုတည်းနဲ့တင် ကျနော်တို့အတွက်ပြည့်စုံနေပါပြီ။ ကျနော်ကကော ဦးထုပ်တစ်လုံးလက်ဆောင်ပေးသူကို ဖိနပ်ပါမပေးရကောင်းလားလို့ အပြစ်တင်နေသူ ဖြစ်ခဲ့သလားမသိပါ။ ဒီ Tutorial ကို ဖတ်ရတဲ့အတွက် ကျနော့်စက်ထဲဝင်နေတဲ့ system_32.exe ဆိုတဲ့ virus ကို လွယ်ကူစွာရှင်းနိုင်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ဒီပို့စ်တင်တဲ့သူကိုသိစေချင်ပါတယ်။ ဒီထက်ဆက်လက်ရေးနိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်။
126 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 13th November 2010, 9:44 am
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-11-04
batfile ကို run လိုက်ရင်
command is disable by adminstrator လို့ပဲပေါ်နေတယ်ဗျာ ကွန်မန်းတွေအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး
127 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 15th November 2010, 7:34 am
networkcrazy67 wrote: အစ်ကိုတို့ရေကူညီပြီးပြောပေးကျပါဦး
registry ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ ctrl +fကိုနှိပ်ပြီး disablecmd လို့ရိုက်ထည့်ပြီးရှာကြည့်လိုက်ပါ။ တွေ့ရင် သူ့ရဲ့ Value ကိုကြည့်ပါ။ 1 ဖြစ်နေရင်0လို့ပြောင်းလိုက်ပါ။ လိုအပ်ရင် reset ချရပါလိမ့်မယ်။ ရလောက်ပါပြီ။
128 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 19th November 2010, 2:10 am
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-11-19
Batch File သင်ခန်းစာ တွေ က တော်တော်ကောင်းပါတယ်
ဒါပေမဲ့ ကျွတ်တော်က online မှာ အချိန်သိပ်မပေးနိုင်ဘူးလေ
အဲဒါ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် Batch File သင်ခန်းစာတွေကို ရသလောက်အကုန် mail ကို ပို့ပေးပါလားဗျာ
ကျွန်တော်အကောင့်က idislikesexy ပါ
129 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 22nd January 2011, 8:11 pm
စာအုပ်ဆိုရင်အားပေးမယ် သတင်းပို့လိုက်လေ စာအုပ်ကပိုကောင်းတယ်ထင်မိတယ်
130 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 20th October 2011, 10:19 pm
အဲဒီ e-book လေး ခုဘယ်မှာ ရနိုင်အုန်းမလဲဗျာ Link တွေက Expire တွေဖြစ်ကုန်ပီမို့လို့
131 Thanks on 3rd December 2011, 4:44 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2011-12-03
ကျွန်တော် batch file ရေးတာကို တော်တော်ကြီးကိုလိုချင်နေတာ။လိုက်ရှာသေးတယ်။ command တွေပဲတွေ့တယ်။ အခုမှတော်တော်နားလည်သွားတယ်။
132 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial]